Herisetra nandritra ny fifidianana Antananarivo no tena nietraketraka
Maherin`ny 60 ireo antontan-taratasy voarain`ny PEV Madagascar na fandaharan`asa ho amin`ny fametrahana fitoniana sy lavitry ny herisetra mahakasika ny herisetra nandritra ny fifidianana voalohany fihodinana voalohany araka ny tatitra nataony.
Tsikaritra fa nisy ny herisetra, indrindra ara-batana toy ny fanimban-javatra, fikasihan-tanana eo amin`ny samy mpomba, hoy ny tompon’andraikitra. Nisy koa ny fihantsiana sy tsy fanajana (fair-play electoral) nandritra ny fiatrehana ny fihodinana voalohany. Ny teto Antananarivo no nahitana tranga maro nisehoana herisetra amin`ny maha toerana be mpifidy azy. Nanaraka azy ihany koa i Fianarantsoa sy Toliara. Teo amin`ny tsy fandriampahalemana nandritra ny androm-pifidianana indray dia i Miandrivazo no anisan`ny nahitana izany. Nanomboka tamin`ny volana martsa no nanao fanaraha-maso amin`ny herisetra sy hetraketraka mifandraika ny fifidianana ny PEV Madagascar.